गर्मीमा आइसक्रिम खाने बानी छ ? ख्याल गर्नुहोस्
गर्मी मौसम सुरु भएसँगै आइसक्रिम चुस्न कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुहोस तपाईले खाइरहेको आइसक्रिम अखाद्य पदार्थबाट बनेको त छैन ? बजारमा अखाद्य पदार्थ मिसिएका आइसक्रिमहरू छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेका छन् ।
मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने अखाद्य पदार्थ मिश्रण गरेर उत्पादित आइसक्रिम खुलेआम विक्रि वितरण भइरहेको पाइएको छ । सम समयमा अन्य खाद्ययबस्तुमा प्रशासनले अनुगमन गर्र्दै आएपनि आइसक्रिम, कुल्फी, बरफ लगायतमा अनुगमन गदैन् ।
आइसक्रिम बनाउन प्रयोग गरिने आइसिङ सुगर अर्थात एक प्रकारको केमिकल प्रयोग हुने र सो केमीकल प्रयोग भएमा मानवस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने डाक्टरहरु बताउँछन् । तर व्यापारीहरुले अत्यन्तै धेरै उक्त केमिकल प्रयोग गरेर आइसक्रिम बेचिरहेका छन् ।
आइसक्रिममा प्रयोग हुने स्किन मिल्क पाउडर, काष्टम पिठो, आरारोटको मात्रा नमिलाउँदा पनि आइसक्रिमले मानव स्वस्थ्यमा असर गर्ने डाक्टरहरुले बताएका छन् ।
खाद्यय विशेषज्ञ पशुपति मीश्रका अनुसार विभिन्न केमिकल र अखाद्य पदार्थ भएका आइसक्रिमहरु ब्जारमा भेटिन थालेका छन् । बजारमा पाइने आइसक्रिममा उत्पादन मिति र म्याद जाने मिति समेत नलेखिएका आइसक्रिम फेला पर्ने गरेको छ । अझ पूर्वी झापामा त यो समस्या निकै बढी छ ।
आइसक्रिम तयारी गर्न दूध समेतको आवश्यकता पर्ने र उक्त दूध कसरी फटाइन्छ, दूध फटाउन कस्ता केमिकल प्रयोग गरिन्छ, आइसक्रिम बनाउन कस्तो कलर प्रयोग गरिन्छ, आइसक्रिमको कलर खान योग्य छ कि छैन भनेर समेत लेखाजोखा हुनुपर्ने बेला आएको खाद्यविद्हरू बताउँछन् ।
बढी केमिकल प्रयोग गरिएका आइसक्रिम, कुल्फी र पेय पदार्थको सेवनबाट बालबालिकालाई गम्भीर असर पर्ने खाद्यविद् मित्रले बताए । बजारमा आउने गरेका आइसक्रिमहरु ल्याब टेस्ट बिनानै बजारमा आउँछन् । तर ति कुल्फीहरूको ल्याब टेस्ट अनिवार्य मानिन्छ ।